Facebook Account Hack လုပ်( ခိုးယူခြင်း )မခံရအောင်ကာကွယ်ပါ | Online Service Center Myanmar -->
ဒါကိုရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ဟိုအကြောင်းပေါ်လာလိုက် ဒီအကြောင်းပေါ်လာလိုက်ဖြစ်နေတာနဲ့မရေးဖြစ်ပဲရှိနေတာတော်တော်ကြာပြီ။ ယခင်ရေးထားတာတွေရှိပေမယ့်လည်း သိတဲ့သူနည်း၊ ဖတ်တဲ့သူနည်းတဲ့အတွက် အသေးစိတ်ထပ်ရေးပြီး မဖြစ်မနေ Security ပိုင်းလေးတွေကို အလေးထားပြီးလုပ်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းရင်း မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ Facebook Account တွေကို ခိုးယူပြီး ငွေညှစ်နေသူတွေက ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ခိုးယူနေကြလဲဆိုရင် Recovery Test လုပ်ပြီး၊ I Can't Login ဖောင်ဖြည့်ပြီး၊ SE ထိုးပြီး Phishing App, Phishing Website တွေနဲ့ထောင်ဖမ်းခြင်း၊ ဆိုတဲ့ နည်းတွေထဲက တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းကိုသုံးပြီး ခိုးယူကြတာများပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ခိုးယူမှုတွေရန်ကနေ ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် အောက်ပါအချက်လေးတွေကို မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုပါမယ်။
Account Hack ( Recovery လုပ်ပြီးခိုးယူ ) ခံရခြင်းမှကင်းဝေးအောင် လုပ်ထားသင့်တာလေးတွေ.....
မိမိတို့ Facebook အကောင့်ကို Security မြှင့်ထားချင်တယ်ဆိုရင်
Facebook မှာ Security ပိုင်းအနေနဲ့မဖြစ်မနေလုပ်ထားသင့်တာလေးပါ။ မလုပ်တတ်ဘူး။ အရမ်းခက်တယ်၊ နည်းပညာအကြောင်းဘာမှမသိဘူးဆိုပြီး ဘူးပဲခံမနေပါနဲ့မွေးကတည်းက ဘယ်သူမှ ဘာမှတတ်မလာပါဘူး။ နည်းနည်းလေးအချိန်ပေးပြီး သေခြာဖတ်ပြီး လိုက်လုပ်ကြည့်ပေးပါ။
Security Settings ထဲကို ဝင်ပြီး အောက်ပါတို့ကို လုပ်ထားပါ။
၁။ Login Alerts ကို On ထားပါ။
၂။ မိမိဖုန်းနဲ့ အသက်သွင်းထားပြီး Two-Factor Authentication ( Login Approvals ) ကို on ထားပါ။
၃။ Your Trusted Contacts မှာ ကိုယ့်မိသားစုဝင် (or) အရင်းနှီးဆုံး စိတ်ချရဆုံး သူငယ်ချင်း အနည်းဆုံး ၃ ယောက်ကနေ ၅ ယောက် ထည့်ထားပါ။
၄။ Recognized Devices ကို မကြာခန ဆိုသလို ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပါ
ကိုယ်မသိတဲ့ Log ကိုတွေ့လျှင် Remove လုပ်ပစ်ပါ။
၅။ Where You're Logged In ထဲကို မကြာခန စစ်ဆေးပါ ကိုယ်မသိတဲ့ Device တွေ IP တွေ Location တွေ နဲ့ဝင်ထားတာတွေ့လျှင် Password ချိန်းပြီး Sign Out All လုပ်ပစ်ပါ။
အဲ့ဒီ ( ၅ ) ချက်ကို လိုက်နာပြီး လိုက်လံလုပ်ဆောင်ထားရင် သင့်အကောင့် 99% Safe ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ် အကောင့် Hack ( Recovery လုပ် ခိုးယူ ) ခံရခြင်းမှ
အပေါ်မှာပြောထားတာတွေကို တစ်ခုမှမသိဘူး။ ဘယ်မှာဝင်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဆိုရင် အောက်မှာ အသေးစိတ်ရေးပေးထားပါတယ်။ အသေးစိတ်သေခြာလေးဖတ်ပြီး သေခြာလေးလိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အရမ်းလွယ်တယ်၊ ဘာမှမခက်ဘူးဆိုတာ သိသွားပါလိမ့်မယ်။
ကဲ.... အရင်ဆုံး Security and Login ထဲကို အရင်သွားလိုက်ပါ။
Facebook ထဲက Account Settings => Security and Login
( မသွားတတ်ရင် ဒီလင့် http://bit.ly/SecurityandLogin ကိုနှိပ်။ )
အိုကေ Security and Login နေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင် အောက်နားကို နည်းနည်းလေးဆင်းကြည့်လိုက် Setting Up Extra Security ဆိုတာလေးတွေ့လိမ့်မယ်။
1. Get alerts about unrecognized logins.
3. Choose3to5friends to contact if you get locked out.
ဆိုပြီး ( ၃ ) ခုတွေ့မယ်။
အဲ့ဒါလေးမှာ On လို့ပြမနေပဲ off တွေချည်းပဲပြနေတယ်ဆိုရင် သင့်အကောင့်ရဲ့ Security ပိုင်းက တော်တော်လေးကိုဆိုးရွားနေပြီး ခိုးခံရနိုင်ခြေ 99% လောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။ အဲ့ဒါလေး ( ၃ ) ခုလုံးကို On ဖြစ်နေအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
ကဲ.... အရင်ဆုံး Get alerts about unrecognized logins ထဲဝင်ပြီး Login Alerts လေးတွေကို On လိုက်ကြရအောင်။
Account Settings => Security and Login => Get alerts about unrecognized logins.
( မသွားတတ်ရင် ဒီလင့် => http://bit.ly/Getalertsaboutunrecognizedlogins ကိုနှိပ်။ )
1. Get notifications.
2. Don't get notifications.
ဆိုပြီး ၂ ခုစီရှိတယ်။ Get notifications ဆိုတာလေးတွေချည်းပဲ လိုက် Select ပေးပြီး Save ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ရပြီ။
ဒါလေးတွေကို On ထားပေးလိုက်တဲ့အတွက် ကိုယ့် Account ထဲကို ဝင်နေကျမဟုတ်တဲ့ Device, IP, Location တွေကနေ Login ဝင်လိုက်တာနဲ့Alerts လေးတွေကို Noti မှာရော၊ Messenger မှာရော၊ Email ထဲကိုပါ တစ်ပြိုင်ထဲပို့ပေးမှာဖြစ်လို့ ကိုယ့်အကောင့်ထဲကို ကိုယ်မဟုတ်ပဲ အခြားသူက ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် အမြန်ဆုံး Safe ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အခု ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ Two-Factor Authentication လေးကို On မယ်။
Account Settings => Security and Login => Two-Factor Authentication.
( မသွားတတ်ရင် ဒီလင့် => http://bit.ly/Two-FactorAuthentication ကိုနှိပ်။ )
အထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် ကိုယ့်အကောင့်ထဲမှာ ဖုန်းနံပါတ်ချိတ်ထားတယ်ဆိုရင် Get Start ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်။ အဲ့ဒီမှာ ဖုန်းနံပါတ်ကို Code ပို့မလားမေးမယ်။ ပို့မယ်ဆိုပြီးနှိပ်ပေးလိုက်။ Code ထည့်ဖို့ Box လေးတစ်ခုပေါ်လာမယ်။ ခနစောင့်လိုက် ဖုန်းထဲကို Text Message ၁ စောင် ဝင်လာမယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ Code Number လေးပါလာမယ်။ အဲ့ဒီ Code နံပါတ်လေးကိုထည့်ပြီး Finish ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ရပြီ။
ဒါလေးကိုလုပ်ထားလိုက်တဲ့အတွက် ကိုယ့် Account User Name နဲ့ Password ကို အခြားသူတစ်ယောက်က ရသွားခဲ့ရင်တောင် ကိုယ့် အကောင့်ထဲကို အလွယ်တကူဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီ ဖုန်းနံပါတ်ကို ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့သူပဲ Login Approval Code ရရှိမှာဖြစ်လို့တစ်ယောက်ထဲပဲ ဝင်လို့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာ Get Code လေးကိုနှိပ်ပြီး သူပြလာတဲ့ Code 10 မျိုးကို SS ရိုက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်၊ စာအုပ်ထဲမှာ ရေးမှတ်ထားတာဖြစ်ဖြစ် လုပ်ထားလိုက်ပါ။ ကိုယ့်အကောင့်ထဲက ဖုန်းနံပါတ်ပြုတ်သွားတာမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင် အဲ့ဒီ Code လေးတွေနဲ့ပြန်ဝင်လို့ရတာမို့ပါ။
အခု တတိယအနေနဲ့ Trusted Contacts ထဲမှာ ကိုယ်အယုံကြည်ရဆုံး၊ စိတ်အချရဆုံး၊ အလွယ်တကူဆက်သွယ်ပြီးပြောဆိုလို့ရတဲ့ ကိုယ့် Friend list ထဲက5ယောက်ကိုထည့်ဖို့လုပ်ပါမယ်။
Account Settings => Security and Login => Choose3to5friends to contact if you get locked out.
( မသွားတတ်ရင် ဒီလင့် => http://bit.ly/Choose3to5friendstocontactifyougetlockedout ကိုနှိပ်။ )
အထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင် Friend Name တွေကို ရိုက်ထည့်ဖို့ box လေး တစ်ခုရှိနေမယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ ကိုယ့် Friend list ထဲမှာရှိတဲ့ မိသားစုဝင်ထဲက၊ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတွေထဲက၊ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူ5ယောက်ကိုထည့်ပြီး Save လုပ်ထားလိုက်ပါ။
ဒါလေးကိုထည့်ထားတဲ့အတွက် ကိုယ့် Facebook Account တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် အဲ့ဒီ5ယောက်ထဲက3ယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ ကိုယ့်အကောင့်လေးကို Access ပြန်ရအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ Lock ကျလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ Hacked လုပ်ခံရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Login ဝင်ရာမှာ အဆင်မပြေဖြစ်နေရင်ဖြစ်ဖြစ် ဒီနေရာမှာထည့်ထားသူတွေအကူအညီကို ယူလို့ရပါမယ်။
အပေါ်က ၃ ခုကတော့ မဖြစ်မနေလုပ်ထားသင့်တာလေးမို့ပါ။ နောက်ထပ် ကျန်ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်း မေ့ထားလို့တော့မရပါဘူး။
4. Where You're Logged In.
ဒါလေးကတော့ Security and Login ထဲကို ဝင်ဝင်ချင်းမှာတွေ့ရတာလေးပါ။ Device, IP, Location တွေကိုစစ်လို့ရတာလေးပါ။
ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုရင်.... Account Settings => Security and Login => Where You're Logged In.
( မသွားတတ်ရင် ဒီလင့် => http://bit.ly/WhereYoureLoggedIn ကိုနှိပ်။ )
Security and Login ထဲကို ဝင်ဝင်ချင်းမှာ ကိုယ့်အကောင့်ကို ဝင်သုံးနေတဲ့ Device Name တွေ Location တွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ အကုန်လုံးကိုကြည့်ချင်ရင် အောက်နားက See More... or See All ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် Access ဖြစ်နေတဲ့ Device, IP, Location တွေကို မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ i Phone or Android Phone ရဲ့ Brand Name, Model လေးတွေကို စစ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Device Name မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်မသိတဲ့ Device, IP, Location ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Log Out or Log Out All လုပ်ပစ်ပြီး Password ချိန်းပစ်တာ၊ Security Check လုပ်ပြီး။ Security ကိုအမြင့်ဆုံးမြှင့်ထားလိုက်ဖို့လိုပါမယ်။
တစ်ခါတလေကျရင် Device Name တော့တူနေပြီး Location က ကိုယ်နေတဲ့မြို့မဟုတ်ပဲ အခြားမြို့ တွေကိုပြနေရင်တော့ အဲ့ဒီ Yangon, Myanmar. ဆိုတဲ့ ဟာလေးတွေအပေါ်မှာ လိုက်ထောက်ကြည့်လိုက်ပါ။ IP Number လေးတွေပေါ်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ တိုက်စစ်ကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ့် IP ဟုတ်မဟုတ်သိရပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ဘူးဆိုအပေါ်မှာပြောထားသလိုလုပ်ပစ်လိုက်ပါ။
ဒီ Where You're Logged In ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ မကြာခန ဝင်ဝင်စစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ကိုယ့်အကောင့်ထဲကို အခြားသူခိုးဝင်နေတာမျိုးတွေရှိရင် သိရှိပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်လို့ရနိုင်တာမို့ပါ။
ကိုယ့်အကောင့်လေး Safe ဖြစ်ဖို့အတွက် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် Knowledge လေးတွေသိရှိသွားအောင်နဲ့ သင့် Facebook Account Safe ဖြစ်မဖြစ် ဒီနေရာလေးကိုသွားပြီး မေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီး စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါ။ => http://bit.ly/YesorNoSecurityQuestions
စာကလည်း တော်တော်ကို ရှည်နေပြီ။ စာများပြီး စာတွေရှည်၊ လျှာတွေရှည်ထားရင် ဘယ်သူမှ မဖတ်ချင်ကြဘူးဆိုတာသိပါတယ်။ မီးခရုလား၊ သားပတ်ကျိလား၊ ဒီနေ့ ဖင်ပူတယ် ခေါင်းပူတယ် နေမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ အဖီးလ် တစ်လိုင်းပို့စ်တွေလောက်တောင် စိတ်ဝင်စားမှုမထားကြတာလည်းသိတယ်။ သို့ပေမယ့် ဒီ Post လေးကိုတော့ မဖြစ်မနေဖတ်ပြီး ကိုယ့်အကောင့်လေးတွေကို ခွေးသူခိုး အောက်တန်းစားတွေလက်ထဲ အလွယ်တကူမပါသွားကြစေဖို့၊ ပါသွားပြီးငွေညှစ်ခံရပြီး လူဒုက္ခ စိတ်ဒုက္ခမရောက်ကြစေဖို့ သေခြာလေးဖတ်ပေးပါ၊ သေခြာလေးလိုက်လုပ်ထားပေးပါ၊ လို့တော့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဖတ်ပြီး ကိုယ့်မိသားစုဝင်၊ အသိမိတ်ဆွေတွေကိုလည်း Security ပိုင်းလေးတွေကိုလုပ်ရတာဘာမှမခက်ဘူး။ လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါလို့ တိုက်တွန်းလို့ရအောင် ဒီ Post လေးကို Sharing လေးလုပ်ပေးလိုက်ကြပါဦးဗျာ။
Aung Kyaw Soe ( 25.5.2018 - 10:20 PM )
Facebook Knowledge Security Sharing Technology Tutorial
Anonymous August 20, 2019 at 6:11 PM
Aung Kyaw Soe August 20, 2019 at 6:51 PM
ဘာမွမခက္ပါဘူး။ လြယ္လြယ္ေလးပါ။ လုပ္ၾကည့္ထားလိုက္ပါ။